जाडोमा छालालाई कसरी बचाउने ? जान्नुहोस् « Pariwartan Khabar
जाडोमा छालालाई कसरी बचाउने ? जान्नुहोस्
१८ कर्तिक २०७५, काठमाडौ.
छाला मानव शरीरको एक अंग हो । यो अंगले मानव शरीर बाहिरबाट ढाकिएको हुन्छ।छालाको भित्रपट्टि सतहमा कलेजिन र इलास्टिन नामका फाइबर हुन्छन् । यी फाइबरको काम छालालाई सपोर्ट दिने हो । तर, कलेजिन र इलास्टिन फाइबर कम भएपछि छालाले बिस्तारै आफ्नो स्थान छोड्न थाल्छ । छाला कमजोर र केही लचकदार हुँदै जान्छ । कलेजिन र इलास्टिन निकै नै कम भएपछि छालाले पूरै ठाउँ छोड्छ र चाउरी पर्छ ।